Ka fikir masiibooyinku inay go’doon yihiin? Mar labaad ka fikir, ayaa ka digtay UN - Wardeeq 24 TV Ka fikir masiibooyinku inay go’doon yihiin? Mar labaad ka fikir, ayaa ka digtay UN Wardeeq 24 TVWarar-ka Dunida wardeeqnewshttps://wardeeqnews.com/ka-fikir-masiibooyinku-inay-godoon-yihiin-mar-labaad-ka-fikir-ayaa-ka-digtay-un/
Home Warar-ka Dunida Ka fikir masiibooyinku inay go'doon yihiin? Mar labaad ka fikir, ayaa ka...
Ka fikir masiibooyinku inay go’doon yihiin? Mar labaad ka fikir, ayaa ka digtay UN
Marka la eego soo noqnoqodka sii kordhaya ee dhacdooyinka cimilada daran, masiibooyinka iyo cudurrada faafa ee bini-aadamku sameeyay, jawaabaha goos gooska ah iyo kuwa kala firdhay ayaa ku guuldaraysan doona inay wax ka qabtaan sababaha asaasiga ah waxaana laga yaabaa inay dhab ahaantii sii adkeeyaan caqabadaha, warbixinta cusub ee Qaramada Midoobay ayaa ku doodaysa.
Warbixinta Halista Masiibooyinka ee Isku -xiran (PDF) waxay falanqaynaysaa 10 masiibo oo 2020 iyo 2021 ah, oo ay ku jiraan dabkii Amazon, qaraxii Beirut, iyo hirarkii qabow ee Texas ee Mareykanka iyo kuwo kale, waxayna ka dhigaysaa kiiska xallinta dhibaatooyinka noocaas ah inay u baahan tahay wax ka qabashadooda sababaha xididka halkii ay ka ahaan lahaayeen caqabado dusha sare ah.
Previous articleFalastiiniyiinta ayaa wacad ku maray inay la dagaallami doonaan ciidamada Israa’iil haddii ay weeraraan xerada Jenin
Next articleHay’adda NISA oo shaacisay inuu xilka la wareegay Yaasiin Farey